Print Page - Maxaa meydka loo qalaa? Waa maxay "Autopsy"?
Diseases and Conditions => Qaybta Wacyi Galinta => Topic started by: SomaliDoc on April 05, 2016, 11:18:02 PM
Title: Maxaa meydka loo qalaa? Waa maxay "Autopsy"?
Post by: SomaliDoc on April 05, 2016, 11:18:02 PM
Fadlan haddii aad su'aal caafimaad qabtid iigu soo gudbi qeybta su'aalaha: http://somalidoc.com/smf/index.php?board=31.0 (http://somalidoc.com/smf/index.php?board=31.0)
Title: Re: Maxaa meydka loo qalaa? Waa maxay "Autopsy"?
Post by: Mo Digdig on April 06, 2016, 04:35:38 PM